I-ECHR Iyalela IArmenia Ukuba Ihlawule Umonakalo Ewenze KumaNgqina KaYehova Ayi-17
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
DISEMBA 3, 2012
IArmenia Iyalelwe Ukuba Ihlawule Umonakalo Ewenzileyo KumaNgqina KaYehova Ayi-17
ESTRASBOURG, eFrance—NgoNovemba 27, 2012, iNkundla yase Yurophu Elwela Amalungelo Abantu iwise isigwebo sokuba iArmenia imele ihlawule imali engangeeyuro eziyi-112 000 ($145,226) ngenxa yokuphatha kakubi abantu abayi-17 abathe ngenxa yezazela zabo abafuna ukwenza umsebenzi othile. Ikwayalelwe nokuba ihlawule iindleko eziye zakho ngenxa yeli tyala.
Ngo-2005, abafana abayi-17 abangamaNgqina kaYehova babesebenza. Noko ke, bathi bakufumanisa ukuba loo msebenzi babewenza yayingowasemkhosini yaye uphethwe lisebe lomkhosi, bavakalelwa kukuba abanakukwazi ukuqhubeka bewenza ngenxa yokuphathwa kakubi zizazela zabo, ibe ekugqibeleni bawushiya. Kamva babanjwa baza batshutshiswa. Bambi kwabo bafana bagcinwa eluvalelweni iinyanga ezininzi ngaphambi kokuba bayokuvela phambi komantyi. Abayi-11 bagwetywa iminyaka emibini ukuya kwemithathu bebhadla entolongweni.
INkundla yaseYurophu ithe ukutshutshiswa nokugcinwa eluvalelweni kwaba bafana kwakungekho mthethweni, kuba ngo-2005 wawungekho umthetho eArmenia owenza umntu abe netyala xa engayenzi eminye imisebenzi eyenziwa ngabantu. INkundla ithe iArmenia iye yanyhasha ilungelo lenkululeko nokhuseleko lwamaNgqina ngokomthetho obhalwe kwiNqaku 5 le-European Convention on Human Rights. Nangona urhulumente waseArmenia eye wazirhoxisa ezi zimangalo, walile ukubanika imali yokuxolisa neyokugubungela iindleko, nangokuphathwa ngokungekho mthethweni nangokubagcina eluvalelweni. Ngenxa yoko, iNkundla iyalele iArmenia ukuba ihlawule imali ngenxa yempatho-mbi neendleko zenkundla.
Esi sigwebo sithe gqi emva kwezinye izigwebo eziye zawiswa yiNkundla yaseYurophu nxamnye neArmenia ngenxa yemiba yokungathathi cala. Kuwo omane la matyala, amagosa karhulumente eArmenia aye awaphatha kakubi amaNgqina kaYehova angavumanga ukwenza imisebenzi ethile ngenxa yezazela ngokungathi angabantu abayingozi abophula umthetho.
UAndré Carbonneau, igqwetha labamangalelwa uthi: “Isigwebo esiye sawiswa yiNkundla yaseYurophu siyenza icace impatho-mbi eye yanyanyezelwa ngamaNgqina kaYehova. Ukoyiswa kweArmenia kwiNkundla yaseYurophu kubonisa onke amazwe aphantsi kweBhunga laseYurophu kuquka namazwe afana ne-Eritrea, iSouth Korea namazwe akumbindi weAsia ukuba amaNgqina kaYehova analo ilungelo lokuwala umsebenzi wasemkhosini.”
UDavid Semonian, okwiOfisi Yenkcazelo, nantsi inombolo: +1 718 560 5000
EArmenia: UTigran Harutyunyan, nantsi inombolo: +374 93 900 482